Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 33)
I-Xperia ayimelana namanzi: ukubonakalisa ukungangeni manzi kwihlabathi elihambayo
Uninzi lwe-Sony Xperia luyathengiswa ngomgangatho wokumelana namanzi, kodwa inkampani iyacacisa ukuba kungcono ukungazifaki, ngakumbi elwandle.
Ithebhulethi yoMlilo entsha yeAmazon, kubandakanya ixabiso elinye nge- $ 59
IAmazon ivelise iThebhulethi yoMlilo yeAmazon entsha. Esi sixhobo siya kufikeleleka kakhulu kuba siyakuxabisa kuphela i-59 Euro.
I-Bq Aquaris A4.5 4G, i-Android One sele iseSpain
I-Bq Aquaris A4.5 4G yeyona Android One ukubheja kwelizwe lethu ngesiphelo sendlela onokuyigcina nge- € 169 ngoku.
AmazFit, Le yi-Xiaomi smart isongo esitsha
Sonke sijonge phambili ekuhlaziyweni okwesibini kwesaliti esine-Xiaomi Mi Band, kodwa nangona kunjalo, uXiaomi ulungiselele enye isongo esilumkileyo, iAmazFit.
[APK] Uyifaka njani iFotohop Mix kwiThebhulethi ye-Android
Namhlanje sikubonisa indlela echanekileyo yokukhuphela kunye nokufaka uMxube weFotohop kwithebhulethi ye-Android.
I-Meizu Pro 5 ibetha i-Galaxy Qaphela 5 kwi-Geekbench
I-Meizu Pro 5 ezayo igqwesa iGlass Note 5 kwiibhentshi.
I-Galaxy S7 ibonwa nge-Exynos 8890 kwibhentshi elitsha
I-Galaxy S7 ekucingelwa ukuba iphinde ibonwe kuvavanyo lwebhentshi apho kuboniswa iprosesa ye-Exynos 8890.
Thelekisa uMlilo X Dlala iVS Oneplus 2 kunye novavanyo lwesantya
Ukuthelekisa kunye novavanyo lwesantya seMoto X Dlala iVS Oneplus 2.
Imifanekiso elandelayo yeXiaomi Mi Qaphela 2 iyavuza
Eminye imifanekiso evuzayo elandelayo Xiaomi Mi inqaku 2 bonisa ukuba isixhobo esizayo somenzi odumileyo waseTshayina siza kujongeka njani.
I-Nexus Protect: UGoogle angavula inkqubo yayo yewaranti yeNexus
UGoogle kungekudala angazisa inkqubo yewaranti yezixhobo kwiVenkile kaGoogle, ebizwa ngokuba yiNexus Protect.
Ngaba unengxaki zokuvumelanisa i-Android Wear kunye ne-smartphone yakho?
Ngaba awufumani zaziso kwi-Android Wear yakho? Apha sichaza ukusombulula le ngxaki ngendlela elula nekhawulezayo.
I-OnePlus ilungiselela into entle
I-OnePlus ikhuphe umfanekiso wentengiso apho ibhengeza ukwamkela ubunewunewu obuncinci. Inokuba yeyiphi?
Iselfowuni i-OneTouch Xess, savavanya ithebhulethi ye-17-intshi yeAlcatel
Sivavanye iAlcatel OneTouch Xess, ithebhulethi entsha ye-17-intshi eya kuthi ibonakale ngokusebenza kwayo kunye noyilo.
Siza kukubonisa kwividiyo ukuba isebenza njani imo ye-SteadyShot ye-Sony Xperia Z5. Imowudi ekuvumela ukuba uzinzise umfanekiso wevidiyo ngendlela ephawulekayo.
Ngaba i-Galaxy S7 ene-Snapdragon 820? Oku kuboniswa ngumgangatho
Isizukulwana esilandelayo seflegi ye-Samsung, i-Galaxy S7, ibonakala kumgangatho. Esi sixhobo sibonakala phantsi kweSpapdragon 820.
Thelekisa: Apple iPhone 6s Plus VS LG G4
Siyaqhubeka ngokuthelekisa ngokukhethekileyo ukujongana neli xesha i-iPhone 6S Plus vs LG G4.
URicoh Theta S, le yikhamera entsha yeRicoh 360
URicoh Theta S sisixhobo esinomdla esinokwenza ngaso iividiyo ezingama-360-degree kwaye sizithumele emnxebeni
Sihlalutya kwividiyo i-Lenovo Yoga Tab 3 Pro ithebhulethi emele iprojektha yayo ye-pico kunye nokugqitywa komgangatho.
I-Lenovo Vibe P1, sivavanye iflegi entsha yeLenovo
Sihlalutya kwividiyo i-Lenovo Vibe P1, ifowuni entsha yeLenovo emele ibhetri yayo ye-5.000 mAh kunye noyilo olugqibeleleyo.
I-Samsung Galaxy Note 5, siyayihlalutya kwividiyo
Sihlalutya kwividiyo i-Samsung Galaxy Note 5, ilungu elitsha leNqaku leNqaku leSamsung ukukhuphisana ne-iPhone 6s kunye ne-iPhone 6s Plus.
Thelekisa: Apple iPhone 6s Plus VS Sony Xperia Z5 iNkulumbuso
I-iPhone 6s Plus ngoku isemthethweni. Namhlanje senza uthelekiso phakathi kweflegi ka-Apple, i-iPhone 6s Plus vs Sony Xperia Z5 yeNkulumbuso.
AbakwaSony bacebisa ukuba izixhobo zabo zokuntywila azikho kangako
Ngazo zonke ezo ntengiso apho abadlali basebenzise khona i-Sony Xperia ukuyifaka echibini, ngoku icebisa ukuba zingasebenzisi izixhobo zabo emanzini
I-Samsung Galaxy S6 edge + vs iPhone 6s Plus, ngubani oza kuphakama kwitrone yemarike ye-phablet?
Senza uthelekiso olupheleleyo phakathi komda we-Samsung Galaxy S6 + kunye ne-iPhone 6s Plus, ii-titans ezimbini ezikulungeleyo ukunyukela esihlalweni sobukhosi,
Thelekisa: Apple iPhone 6s Plus VS Samsung Galaxy Qaphela 5
Izolo i-iPhone 6s Plus entsha isungulwe kwaye namhlanje sibeka ubuso ngobuso ngokuthelekisa ukubona ukuba zeziphi ezona zilungileyo ze-Android kunye nezona zilungileyo ze-ios eziziswa kubo
I-Samsung Galaxy S7, amarhe okuqala malunga nenkcazo-ntetho kunye nokubalulwa kobuchwephesha
Namhlanje sikuxelela yonke into enamahemuhemu malunga ne-Samsung Galaxy S7, iinkcukacha ezinokubakho malunga nobuchwephesha kunye nomdlalo osemthethweni.
[UPDATED] Ngoku ungathenga i-2 Gb Xiaomi Redmi Qaphela 32 nge-158 yeeYuro, ukunikezelwa okulinganiselweyo kwiiyunithi zokuqala eziyi-100
Sele siyithengile iXiaomi Redmi Qaphela 2 ngexabiso elingenakoyiswa elingaphantsi kwe-190 euro yemodeli ye-32 Gb yokugcina kwangaphakathi nangaphantsi kwe-160 ye-euro ye-16 Gb
Iphambili yeNokia Nexus 5 entsha ihluziwe emfanekisweni
Sinemifanekiso eliqela yezinto eziza kuba yi-LG Nexus 5 entsha esijonge kuyo kwaye iya kuba sisizukulwana sesithathu okoko yaphuma i-Nexus 4.
Iselfowuni Onetouch Yiya ekubukeni, sivavanye iwatchwatch entsha yeAlcatel
Ukuqala, umaleko wokhuselo kunye nomtya wokubukela unokwahluka, ke iAlcatel OneTouch GO Watch iya kuba sisixhobo esinolwenziwo olukhulu. Ewe i-alcatel-onetouch-go-watch-video ilungiselelwe ukunganyangeki, hayi intle.
I-Nexus iqala ukufumana uhlaziyo lwenyanga
Izixhobo zikaGoogle zikaGoogle ziyaqala ukufumana uhlaziyo lokuqala lwenyanga ukukhuphisana neStagefright.
I-Sony Xperia Z5 Compact, kuvavanywa imbangi elandelayo ye-iPhone 6s
Sihlalutya kwividiyo i-Sony Xperia Z5 Compact, ifowuni entsha kaSony ejolise ukukhuphisana neApple kunye ne-iPhone 6s yayo.
I-Moto 360, oku kukubonakala kwethu emva kokuvavanya kwi-IFA 2015
Sihlalutya kwividiyo iMoto 360 entsha, inguqulelo ecokiswe ngakumbi yemodeli yokuqala kwaye iyaqhubeka nokubheja kwi-Android Wear njengenkqubo yayo.
IAmazon inokumilisela ithebhulethi nge- € 50
IAmazon yamazwe aphesheya inokumilisela ithebhulethi enama-intshi ama-6 engaphantsi kwe- $ 50.
INexus 2015 entsha inokuthengisa ngo-Okthobha u-13 olandelayo
UGoogle kulindeleke ukuba abonise i-Nexus 2015 elandelayo nge-29 kaSeptemba kwaye ezi terminals zinokuthengisa ngo-Okthobha 13.
U-Sony uyaqhubeka ngokumangalisa, i-Xperia Z5 Ultra kunyaka olandelayo
Kunyaka olandelayo i-Sony Xperia Z5 Ultra inokuvela ngescreen se-6,44-intshi, into efana nohlobo lwango-2013.
I-Sony ikhupha i-Android Lollipop 5.1.1 i-OTA yeXperia Z, i-Xperia ZL, i-Xperia ZR kunye ne-Xperia yeCwecwe Z
I-Xperia Z, i-Xperia ZL, i-Xperia ZR kunye ne-Xperia Tablet Z sele zifumana i-Android 5.1.1 Lollipop enezinto ezintsha ekusebenzeni nasekulawuleni izandi
I-Acer Predator 8, sivavanye ithebhulethi yokudlala yeAcer
Sihlalutya kwividiyo i-Acer Predator 8, ithebhulethi entsha ye-Acer ejolise kubaphulaphuli bemidlalo kwaye iya konwaba abona badlali
I-HTC ibeka i-smartphone entsha, i-HTC Desire 728
Umvelisi waseTshayina uzise kwilizwe labo lokuzalwa i-HTC Desire 728 entsha, i-5-intshi yesiphelo se-Android.
Imifanekiso yokuqala yeNokia C1 iyavela
Sele sinemifanekiso emibini yokuqala eya kuba yifowuni yeNokia C1 emsulwa ene-5-intshi yesikrini kunye ne-Intel Atom chip
Le yayiyeMoto 360 engabizi kakhulu neyarhoxiswa yiMotorola
IMotorola ivelise isizukulwana sayo esitsha seWatchwatch eyaziwayo e-IFA. Nangona kunjalo, inkampani yaseMelika yayineMoto 360 enexabiso eliphantsi eyirhoxisileyo.
I-Sony Xperia Z5, ukuqala kokuvela
Senza uhlalutyo lwevidiyo kwi-Sony Xperia Z5 apho sikubonisa khona zonke iimfihlo zekhonkco elitsha likaSony
I-Lenovo Vibe X3 ityhilwe ngokupheleleyo
I-Lenovo Vibe X3 iselfowuni ene-screen esine-5,5-intshi, i-Snapdragon 808 chip ene-cores ezintandathu kunye ne-3GB ye-RAM.
I-Samsung Galaxy Tab S2, sivavanye imodeli ye-9.7-intshi
Sihlalutya kwividiyo i-Samsung Galaxy Tab S2, ithebhulethi entsha ye-Samsung enenzwa yeminwe kunye nokugqitywa komgangatho.
I-Samsung Galaxy S6 Edge +, ezi ziyimpawu zethu zokuqala
Sihlalutya kwividiyo i-Samsung Galaxy S6 Edge +, iflegi entsha yoluhlu lweEdge olugqityiweyo lokugqitywa kwayo kunye nobungakanani besikrini sayo.
I-Huawei G8, ukuqala kokuvela kwividiyo
Sikuzisa ividiyo apho sihlalutya khona iHuawei G8, ifowuni ka-Huawei entsha ekumgangatho ophakathi omele isivamvo sayo somnwe kunye nesiphelo
I-Sony Xperia Z5 yeNkulumbuso, sivavanye ifowuni yokuqala ngescreen se-4K
Sihlalutya kwividiyo i-Sony Xperia Z5 yeNkulumbuso, iflegi entsha yenkampani yaseJapan ebalaseleyo kwiscreen sayo se-4K
I-LG Rolly keyboard, sivavanye ikhibhodi engenazingcingo kunye ne-roll-up ye-LG
Sivavanye i-LG Rolly, ikhibhodi entsha engenazingcingo ye-LG ebonelela ngokuzimela okumangalisayo. Ngaba uza kuyiphosa?
I-Huawei Mate S, ukuqala kokuvela kwividiyo
Sikuzisa uhlalutyo lwevidiyo yeHuawei Mate S, iflegi entsha kaHuawei kuluhlu lwe-phablet. Ngaba iya kuba nakho nge-Galaxy Note 5 okanye i-Edge +?
Olu luguqulelo olumhlophe lweNexus 2015
Kukho iintsuku ezimbalwa ezishiye umboniso osemthethweni wezixhobo ezilandelayo ze-Nexus 2015 kwaye namhlanje sibona ukuvuza okutsha kwenguqu emhlophe yeNexus elandelayo.
INexus 6 yehlisa amaxabiso ayo ukuya kwi- € 459
UGoogle wehlisile amaxabiso eNexus 6 ukuya kwi- € 459 ngaphambi kokufika kwezixhobo zeNexus eziza kuboniswa ngoSeptemba 29.
Uyihlaziya njani i-Oneplus 2 kwi-Oxygen OS 2.0.2 ngesandla
Namhlanje sikubonisa indlela yokuhlaziya i-Oneplus 2 kwi-Oxygen OS 2.0.2 ngesandla phambi kwesaziso esisemthethweni senguqulelo entsha yeOxygen Os ekhoyo.
I-Meizu MX5 Pro ifotwe kwinkcazo-ntetho yayo
Iya kuba yintoni iflegi elandelayo yenkampani yaseTshayina, iMeizu MX5 Pro, engakhange ithintelwe ukuvuza okutsha.
Iselfowuni ityhila ukuba ayinamanzi yiya Dlala ifowuni kwaye unxibe Go Bukela
Ukunxiba kunye ne-smartphone emele isatifikethi se-IP67 esibanika ukumelana namanzi kunye nothuli oluboniswe kwi-IFA.
I-ZTE ibhengeza i-Axon Elite yeYurophu, iLatin America neAsia
I-Axon Elite ine-5,5-intshi yesikrini, i-Snapdragon 810 chip, i-3GB ye-RAM kunye ne-32GB ye- € 419. Vumela i Motorola kunye nabanye bangcangcazele.
Iselfowuni iveza ithebhulethi yayo ye-17-intshi Xess e-IFA
Iselfowuni Xess ibonisiwe e-IFA njengomboniso apho sifumana ithebhulethi ye-17-intshi efuna ukuba liziko lemultimedia ekhaya.
Ngokwentetho yamva nje, i-LG Nexus 2015 iya kuba ngaphantsi kwe- € 400
Ulwazi oluthe kratya luza malunga nesiphelo seLG, i-Nexus 2015. Ngokwentetho yamva nje, i-terminal iya kubiza imali engaphantsi kwe-400 euros.
I-Acer Liquid Z: iiterminal ezintsha zaphakathi kwebanga zifika e-IFA
Umnyhadala we-IFA uzise ukuhlaziywa kweetheminali ezininzi, kwimeko ye-Acer bazise uluhlu lwabo olutsha lwe-Acer Liquid Z.
IMoto 360 isizukulwana sesi-2, iwotshi entsha ye-Motorola
Imodeli entsha ye-Motorola smartwatch, iMoto 360, inikezelwe kwi-IFA 2015 ngeenguqulelo ezahlukeneyo ezinomdla kakhulu.
I-Android One iya kuhlala eSpain nge-BQ
I-BQ yinkampani yaseSpain eya kuthi ijongane nokusungula isixhobo se-Android One eSpain nge-17 kaSeptemba.
INew Moto 360 kunye neMoto 360 yeMidlalo
IMotorola ibonakalise iimpahla zayo ezintsha ezinxitywayo kusuku lokuqala lwe-IFA. I-Moto 360 entsha enobukhulu obubini kunye nohlobo lwezemidlalo, iMoto 360 yeMidlalo.
I-Apple's Force Touch ikhuthaza izikrini ze-Android: imeko yeHuawei
IHuawei iphefumlelwe yiApple's Force Touch ukwenza iscreen esinobuthathaka bokuphendula ngokucinezelwa. Ufuna ukudibana naye?
I-Nexus entsha iya kutyhilwa nge-29 kaSeptemba
Ngokwolwazi lwamva nje, ikamva le-2015 Nexus liya kubhengezwa nge-29 kaSeptemba.
Ngoku kuyenzeka ukuba uthenge iMoto X Dlala ngexabiso elingenakubethwa, ubuncinci obumhlophe!
Sele kunokwenzeka ukuba uthenge iMoto X Dlala ngexabiso elifanelekileyo, ubuncinci umbala omhlophe ngexabiso elingaphantsi kwama-350 euros ngelixa umbala omnyama, ngokungaqondakaliyo uneendleko ezimalunga nama-42 euros ngaphezulu.
IGIGASET ME, iinkcukacha kunye namaxabiso omgca omtsha wee-Smartphones zenkampani yaseJamani
Zonke iinkcukacha zobuchwephesha bomgca omtsha we-GIGASET Smartphones, IGIGASET ME.
Intsapho entsha yezixhobo zeXperia Z5 inokubonwa kwimifanekiso
USony uza kuzisa izixhobo zakhe ezintsha ngexesha le-IFA. Nangona kunjalo, ifayili entsha yezixhobo zeXperia Z5 inokubonwa kwimifanekiso
IHuawei Mate S inokubonwa ngemibala emithathu
I-phablet elandelayo evela kwinkampani esekwe e-China, i-Huawei Mate S, ibonwe ngemibala emithathu eyahlukileyo ngaphambi kokunikezelwa kwayo ngokusemthethweni.
I-Moto 360 2015 entsha iya kuboniswa ngoSeptemba 8
Umenzi waseMelika u-Motorola usebenze kakhulu kwixesha lasehlotyeni. Siyibonile indlela ebonise ngayo iifowuni ezintathu ...
Namhlanje ndicacisa indlela yokusombulula iingxaki zokuhlaziya i-Oneplus 2 nge-OTA ngaphandle kokuphulukana nesiqinisekiso semveliso esemthethweni.
I-Samsung Gear S2 ekudala ilindelwe ilapha
Isamsung isizisela iGear S2 phantsi kweThizen kunye neenguqulelo ezimbini ezahlukeneyo kuyilo, enye iklasikhi kwaye enye ibe yeyangoku kwiscreen esincinci.
I-LG Nexus 2015 ene-3 GB ye-RAM, i-Snapdragon 808 kunye ne-2700 mAh
Amarhe amatsha avela malunga neenkcazo zexesha elizayo ze-2015 Nexus terminal eyenziwe yi-LG.
IXiaomi Mi Pad 2 ingabandakanya iprosesa ye-Dual Boot kunye ne-Intel
Ixesha elizayo iXiaomi Mi Pad 2 inokubandakanya i-SoC eyenziwe yi-Intel kwaye iya kuba yiDual Boot.
Ngaba ufuna i-Honor 7 engabizi? Kude kube ngu-Agasti 31 iya kuxabisa i-euro ezingama-300!
I-Honor ikhuphe intengiso enomdla kakhulu kwi-Honor 7. Ukuba ufuna ukuthenga ngexabiso eliphantsi i-7 kwivenkile yabo bayithengisa nge-euro ezingama-300 kude kube nge-31 ka-Agasti.
Imifanekiso yokuqala ye-Nexus 8 ekucingelwa ukuba iyavela
Imifanekiso yokuqala yethebhulethi entsha kaGoogle, iNexus 8, ivele.
Isamsung iyaqhubeka nesicwangciso sayo sokuphumelela abasebenzisi be-Android Ngaba iyasebenza ngokwenene?
Isamsung isungula inkqubo entsha ukuzama ukweyisela abanini be-iPhone ukuba baye kwenye yeGlass entsha. Siyihlalutya kakuhle.
Inkcazo yeNexus 5 2015 inokuba ngoSeptemba 29
I-rumor entsha evela eMzantsi Korea ithi umboniso weNexus 5 2015 ungafika ngoSeptemba 29.
U-Sony ngempazamo uvuza iinkcukacha ze-Xperia Z5
Izizwe ngezizwe zaseJapan, u-Sony, wenze ngempazamo ukuvuza zonke iinkcukacha ze-Xperia Z5, i-Xperia Z5 Plus kunye ne-Xperia Z5 Compact.
I-Moto 360 2015 inokubonwa kwimifanekiso
Imifanekiso emitsha yekamva elibukhali le-Motorola liyavela, iMoto 360 2015. Le smartwatch intsha iya kuba nezinto ezimbini ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kubukhulu bayo.
I-Galaxy Grand On kunye neMega On, iiterminal ezintsha zeSamsung
Ukuvuza okutsha malunga nenkampani esekwe eMzantsi Korea, thetha ukuba inokubonisa iiterminal ezintsha, phantsi kwamagama eGrand On neMega On.
Ngaba ungayithenga i-Galaxy Note 5 yegolide?
Isiphelo esitsha seSamsung sisandula ukufika emarikeni kwaye inguqulelo yegolide yeGalaxy Note 5 sele ivele. Ngaba ungayithenga i-Galaxy Note 5 yegolide?
I-Honor 7 ngoku ikulungele ukuhlala eYurophu
Nge-27 ka-Agasti, iNhlonipho iya kuzisa ingxelo yaseYurophu ye-Honor 7, iflegi entsha yenkxaso-mali yeHuawei
I-HTC Aero ibonakala ifana kakhulu ne-iPhone 6
Ixesha elizayo elaziwa njengeflegi yomenzi waseTshayina, iHTC Aero, inokuba noyilo olufana kakhulu ne-iPhone 6 yangoku.
Isamsung iya kusebenza kwithebhulethi ye-Android ene-intshi eyi-18,4
Imveliso yaseMzantsi Korea i-Samsung inokumisela i-tablet eyi-18,4-intshi.
Isamsung iyaphendula kwiingxaki zePen kwiGalaxy Note 5
Isamsung iyaphendula kwizikhalazo ezivele malunga neengxaki zePen kwisiphelo esitsha, iGlass Qaphela 5, ngenxa yesiphene kuyilo.
Yeyiphi eyona fowuni incinci ye-Android kwintengiso? I-Elephone Mini iyimpendulo
Ngaphambi kwee-smartphones kwakubalulekile ukuba ubungakanani befowuni babuncinci. Ngaba uyafuna ukudibana neselfowuni incinci ye-Android? Yeyona Mini yefowuni.
I-Nexus 8 ene-8 cores ibonakala kwi-benchmark
Kwibhentshi lokulinganisa kuye kwavela ithebhulethi yeNexus 8. Le nto icingelwa ukuba yeye-8-intshi ithebhulethi inokufika nge-8-core GPU.
I-Smartphone yeCyanogenmod ngoku iyafumaneka e-China kwaye kungekudala eYurophu ngexabiso elimangalisayo
Sele sineCyanogenmod Smartphone, iZUK Z1 eyenziwe nguLenovo, efumaneka ukuthengiswa kwangaphambili ngexabiso elimangalisayo.
Uyikhuphela njani kwaye uyifake njani i-Android driver ye Samsung, LG, Sony kunye neHuawei
Namhlanje sikunika uhlaziyo lwamva nje olufumanekayo ukufaka abaqhubi be-Android zeSamsung, LG, Sony kunye neHuawei
I-Nexus yeHuawei inokubandakanya i-Snapdragon 810
I-Nexus yeHuawei inokubandakanya i-2.1 ye-Snapdragon 810 endaweni yenkqubo entsha eyenziwe yiQualcomm, iSnapdragon 820.
[APK] Khuphela uze ufake i-widget yemozulu yeGalaxy S6 kuyo nayiphi na i-Android
Namhlanje sabelana nani nonke iwijethi yemozulu yeGPS S6 kunye nendlela yayo yokufaka ukuze bonwabe kuyo nayiphi na i-Android terminal.
I-Nexus yeHuawei ibonwa kwiifoto ezintsha ezivuzayo
I-Nexus elandelayo yeHuawei inokubonwa kwiifoto ezintsha ezivuzayo, zibonisa ukubonakala kwayo kokugqibela nengaphandle lenziwe ngentsimbi.
IChromecast sisixhobo sesibini esithengisa kakhulu eMelika
Isixhobo sikaGoogle seChromecast yinto enkulu eUnited States, esiba sisixhobo sesibini esithengisa kakhulu.
Imifanekiso yokuqala yokwazisa ye-Xperia Z5 Compact
USony angabonisa ngexesha le-IFA 2015 eBerlin i-terminal entsha, i-Xperia Z5 Compact, umfanekiso wayo wokuqala osele uvuza.
Ingqokelela yevidiyo yeHuawei Nexus, ungathanda ukuba ibe njengale?
Umbono wevidiyo ubonakalisa ukuba i-Nexus ye-Huawei ingabonakala njani. Ngaba ungathanda ukuba kunje?
U-Sony ubhengeza i-SmartBand 2 enxibekayo entsha
I-Sony SmartBand 2 iya kukhathalela ukurekhoda yonke imisebenzi yemihla ngemihla kwisixhobo esiya kuthi, phantsi kwendlela yokuqina, iintsuku ezintlanu zobomi bebhetri.
Hlonipha i-7i ngekhamera ejikelezayo ethiwe thaca ngokusemthethweni
INhlonipho ivelise i-smartphone yayo yamva nje, iNhlonipho 7i. Ifowuni ephathekayo ebandakanya ikhamera ye-Megapixel ejikelezayo ye-13.
I-Galaxy Qaphela i-5 ayifiki eSpain Sikulethela uvavanyo lokuqala lokuhla!
Isamsung yazisa ukuba iNqaku elitsha le-5 aliyi kuziswa eYurophu okanye e-US Ihlala kwintengiso yaseAsia kwaye ukusuka apho kuza kuvavanyo lokuqala lokuhla.
ISpeedo Shine, indawo enamanzi enxitywayo yasemanzini yokuqubha
I-Speedo Shine ilungile inxitywa ukurekhoda yonke imisebenzi yomzimba esiyenzayo echibini. Ukuntywila ukuya kwiimitha ezingama-50.
IMotorola Moto 360S kunye ne360L zidlula kwiFCC yaseBrazil
Izixhobo ezibini ezingaqondakaliyo zidlulile kulawulo lomgangatho waseBrazil phantsi kwamagama i-360S kunye ne-360L. Ngaba iya kuba yiMoto 360S kunye neMoto360L entsha?
Isamsung iveza uluhlu lwayo lwezixhobo: i-Galaxy O
Isamsung isafuna ukwandisa uluhlu lwezixhobo kwaye ke iya kuzisa uluhlu olutsha, i-Galaxy O.
I-Xperia Z5 Plus, isikrini se-4K kunye nesenzwa zeminwe
Ulwazi luye lwavuza malunga nesixhobo esitsha sikaSony, iXperia Z5 Plus. Isiphelo esiza kuba nescreen se-4K kunye nesenzwa somnwe weminwe.
Le iya kuba yiHuawei Nexus
Siyaqhubeka nokuvuza kwaye namhlanje kufuneka sithethe ngekamva leHuawei Nexus.
Ngaba iMotorola ilahlekile iMoto 360 entsha?
I-Moto 360 entsha iya kutyhilwa kwiinyanga ezizayo, nangona kubonakala ngathi iMotorola ifumene isiliphu efundise ukuba kunxitywa.
Ividiyo evuzayo yeNexus 2015 entsha
Ilindelwe ngabasebenzisi abaninzi, i-Nexus 2015 iya kuboniswa kwiinyanga ezizayo, kodwa ayikasindiswa ekuvuza kwaye siyayibona kwividiyo.
Le yiGear S2, iwotshi ejikelezayo ye-Samsung
Izolo emva kwemini ibiyimini yokubonakaliswa kweeterminal ezintsha zeSamsung, iGlass Note 5 ...
UXiaomi uveza ngokusemthethweni iRedmi Qaphela 2
I-Xiaomi iazise ngokusesikweni i-phablet yayo entsha, iRedmi Qaphela i-2.I-phablet ekumgangatho ophakathi eya kuthi inike okuninzi ukuba uthethe ngayo.
Le yi-OnePlus 2 ngaphakathi enkosi kwi-iFixit
I-IFixit, inkampani egxile ekudibaniseni iifowuni eziphathwayo, iyichithile ngokupheleleyo i-OnePlus 2. Ngaba uyafuna ukubona ukuba i-OnePlus 2 ijongeka kanjani ngaphakathi?
Thelekisa i-Galaxy S6 Edge VS Galaxy S6 Edge +
Namhlanje baveze i-Galaxy S6 Edge Plus entsha. Luzisa ziphi inkqubela? Ungaphoswa lolu thelekiso lweGPS S6 Edge kunye neS6 Edge Plus.
Thelekisa i-Galaxy Note 4 VS Galaxy Qaphela 5
Namhlanje kuziswe isizukulwana sesihlanu seSamsung ye-Samsung entsha ye-5. Ngaba izisa yiphi inkqubela ngokubhekisele kwisizukulwana esidlulileyo?
I-Samsung Galaxy S6 Edge + ityhilwe ngokusemthethweni
I-Samsung Galaxy S6 Edge + sele ihanjisiwe. Zonke ezi ziyimfihlelo zefowuni yefowuni ye-Samsung egobileyo
Isamsung yazisa ngeNqaku 5
Isamsung yazisa ngeNqaku 5 elitsha eliphethe imigca efanayo yoyilo njengeGPS S6. I-smartphone enkulu kodwa ngaphandle kwekhadi le-MicroSD.
Yintoni elandelayo?: Ungayilandela njani ingafakwanga i-Samsung Galaxy Note 5 bukhoma
Ngaba ufuna ukubona i-Samsung Galaxy Note 5 engafakwanga bukhoma? Ukusuka kwi-Androidsis sinesihlalo esikhethelwe wena.
Ukucaciswa kweNexus 5 kuvuza: umzimba wentsimbi, 5,2 ″ isikrini, izithethi zangaphambili, isivamvo somnwe kunye nohlobo C lwe-USB
I-Nexus 5 ye-LG iphantsi kophuhliso kwaye kancinci kancinci iindaba ezinxulumene noko ziya kuphuma, ngeli xesha kufikelela kwinkcazo.
I-ZUK Z1, i-smartphone yaseAsia ene-3 GB ye-RAM kunye ne-Snapdragon 801
Inkampani entsha evela e-China isibonisa ngesiphelo esinexabiso elitsha ngexabiso eliqhekezayo, yi-ZUK Z1.
[APK] Khuphela uguqulelo lweSpotify lweetafile kwaye ulifake kwiselula yakho ye-Android
Khuphela i-apk ye-Spotify eguqulweyo yeeTafile ukuze ikwazi ukufakela kwii-mobiles ze-Android kunye nokukhubaza ukudlala ngokungekho mthethweni.
Ngaba le fowuni iza kuba yiHuawei inyuka ngeMate 7 Plus okanye i-7 Mini?
Imithombo yeendaba yaseTshayina ichaze ukuba ifowuni entsha edlulile kwi-AnTuTu yiHuawei Mate 7 Plus okanye iHuawei Mate 7 mini
Umlindo olandelayo weSamsung, iGear A, iya kuba neenguqulelo ezintathu
Umjikelo olandelayo we-Samsung, ogama linguGear A, uya kuba neenguqulelo ezintathu
I-MIUI 7 iya kuphehlelelwa nge-19 ka-Agasti
UXiaomi uzokwazisa inkqubo yakhe entsha esekwe kwi-Android Lollipop, MIUI 7, ngo-Agasti 19.
Xiaomi Redmi 2 Inkulumbuso ibhengezwe ngokusesikweni
UXiaomi uzise namhlanje, yeyiphi i-smartphone yakhe yokuqala eyenziwe ngokupheleleyo e-India, iRedmi 2 Prime.
Eminye imigaqo yeXiaomi Redmi Qaphela 2 iyavuza
Nge-13 ka-Agasti, iXiaomi iya kuzisa uluntu ngokubanzi i-terminal entsha, iXiaomi Redmi Qaphela 2.
Eminye imifanekiso evuzayo yeNqaku 5 kunye ne-S6 Edge Plus
Nge-13 ka-Agasti ka-Agasti, i-Samsung izakuveza i-Samsung Galaxy Note 5 entsha, ethe yavuza, kwakhona kunye ne-S6 Edge Plus.
Ngaba ufuna ukuthenga i-HTC One M9 ngexabiso eliphantsi? Ewe, kwi-Ebay bayazithengisa nge-euro engaphantsi kwama-450
Ukuba ujonga indlela yokuthenga i-HTC One M9 ngexabiso eliphantsi ungajongi kwakhona: kwi-Ebay iyafumaneka nge-445 euro
Sikubonisa indlela yokutshintsha ikhava yeMoto G 2015 ukuze ihlale ingangeni manzi
Siza kukubonisa indlela yokutshintsha ikhava yangemva yeMoto G 2015 ukuze ungalahleki nokhuseleko lwamanzi kwaye uguqule ifowuni yakho ibengamaphepha
UXiaomi usengukumkani weentengiso e China
Akukho mntu unokuhlalisa iXiaomi. Umenzi waseTshayina usengukumkani othengisayo e-China.
I-HTC ikhupha ingxelo entsha yezemali. Isisombululo? Isizukulwana esitsha see-smartphones ezinomtsalane ngakumbi
Ukuthengiswa kwe-HTC kuqala ukuba kubi. Umenzi waseTaiwan ungene kwilahleko efikelela kwizigidi ezingama-252 zeedola.
IHuawei ekucingelwa ukuba yiNexus iyavela kwividiyo
Ukuvuza kusenza sibone izinto ngaphambi kokuba zenzeke. Sonke silindele ukuba iHuawei Nexus kulo nyaka ibonakaliswe kwividiyo.
Iindlela ezintsha zokuthengisa: I-OnePlus 2 inyusa ifandesi kwi-Ebay yesisa
Izimemo ze-OnePlus ezigxekwayo ziye zafuna ukuzithengisa ngcono ngokubulela kwifandesi yesisa kwi-Ebay ye-OnePlus 2.
I-OnePlus 2 ithengisa e-China ngomzuzu nje omnye
I-OnePlus 2 ibizwa ukuba yenye yeetheminali zonyaka kwaye e-China ithengisiwe yaphela ngomzuzu omnye.
I-Sony Xperia Z5 kunye ne-Z5 Compact iya kuba nenzwa yeminwe
Imifanekiso emitsha evuzayo yeSony Xperia Z5 Veza isivamvo seFingerprint ngakwicala leFlag elandelayo yeFlag
Ukucoca imifanekiso emitsha ye-Samsung Galaxy Note 5
Enye yeeterminal esilinde yona ngo-2015 yiGalaxy Note 5.
Inhlonipho ibambe i-smartphone yekhamera eshukumayo ezandleni zayo
I-brand-sub-brand kaHuawei eyilelwe kuphela iYurophu, iNhlonipho, ibambe isixhobo ngekhamera esliding.
I-Samsung Galaxy S4 Mini Plus iboniswe ngokusemthethweni
Ngokuzola, inkampani yaseKorea iazise ngokusesikweni i-terminal entsha, yi-Samsung Galaxy S4 Mini.
Oku kunokuba yi-Nexus 5 2015
Kukho ukushiyeka okuncinci ukufumanisa iselfowuni elandelayo evela kuGoogle kwaye yenziwe yi-LG, iNexus 5 2015.
IMui V7 esekwe kwi-Android Lollipop izakufumaneka nge-Agasti
Kwiveki ezayo uXiaomi usimema kumnyhadala wentetho yenguqulo entsha iMui V7 esekwe kwi-Android Lollipop.
I-OnePlus ilungiselela i-smartphone yesithathu eza kuphuma ngaphambi kokuphela konyaka, i-OnePlus Mini?
Inkampani yaseTshayina i-OnePlus ine-smartphone yayo yesithathu ezandleni zayo ekupheleni konyaka, ngaba iya kuba yi-OnePlus Mini ehletywayo?
I-Galaxy Note 5: amanqaku atyhilwe ngu-Evleaks
U-Evleaks utyhile ukuba yeyiphi inqaku le-Galaxy Note 5. Sizijongile namhlanje.
I-HTC One M9 kunye ne-One M8 ziya kuhlaziywa kwi-Android 5.1.1 Lollipop
I-HTC One M9 kunye ne-HTC One M8 terminals ziya kuhlaziywa kuhlobo lwamva nje olukhoyo ngoku, i-Android 5.1.1 Lollipop kungekudala.
I-Samsung Galaxy J2 ibonisa iimpawu zobomi
Umlandeli weGlass J1 ukujikeleze ikona. Enkosi kuvavanyo oluvunyiweyo oluqinisekisa iimpawu zeSamsung J2 elandelayo.
Isamsung iqinisekisa ukuba i-smartwatch yayo elandelayo, iGear A, iya kujikeleza
Umvelisi osekwe eMzantsi Korea uqinisekisile ukuba i-smartwatch yayo elandelayo phantsi koluhlu lweGear A iya kuba ngqukuva kwaye ibe nesakhelo esijikelezayo.
Enye indlela eya kwi-Moto G3, ukucaciswa okungcono kunye nexabiso
Ezi zezinye iindlela zam kwi-Moto G3, izikrini ezingcono, iiprosesa, i-RAM, imemori yokugcina yangaphakathi kunye nexabiso eliphantsi
Ekuphela kwendlela yokonwabela i-WhatsApp kwiThebhulethi ye-Android
Namhlanje sikufundisa ukonwabela i-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android ngendlela esemthethweni ngokupheleleyo kwaye ivunyelwe yi-WhatsApp
Ngaphezulu kwama-750.000 okubhukisha kwi-OnePlus 2
Sele kukho ngaphezulu kwe-750.000 yokubhukisha kwi-OnePlus 2, ifowuni enokugqitha kwimpumelelo yemodeli yokuqala ye-OnePlus
I-Lenovo Vibe P1, ifowuni enebhetri ye-5.000 mAh
Umfanekiso wokuqala ukhutshiwe, kunye neempawu zobuchwephesha zeLenovo Vibe P1, itheminali entsha yeLenovo enebhetri ye-5.000 mAh
Isizukulwana sesibini seMoto 360 sidlula kwiCCC
Uninzi belulindele ukuba iMotorola izise isizukulwana sesibini sewatchwatch yayo, iMoto 360, kumsitho wayizolo.
Izicelo ezibalulekileyo zeetafile ze-Android: Namhlanje CudaSayina ukusayina ngamanani kwaye ugcwalise amaxwebhu
I-CudaSign yenye yezi zicelo zibalulekileyo kwiithebhulethi ze-Android eziya kuthi zisivumele ukuba sisayine ngokwamanani kwaye sigcwalise amaxwebhu ngokulula.
IMeizu M2 sele iyinyani kwaye ngexabiso elingenakubekwa
IMeizu M2 isandula ukwaziswa. Isiphelo esitsha se-Meizu esiphakathi kwinqanaba eliphakathi simele ixabiso laso: iMeizu M2 iya kuxabisa ngaphantsi kwe-100 euro
Moto X Dlala, i-smartphone efanelekileyo ye-Android
IMoto X Dlala inokuba yeyona smartphone ifanelekileyo ngoku ngesixhobo esikhulu, uyilo olukhulu kwaye luza ngexabiso eliphantsi kuneSitayile kunye ne- € 399 yayo.
IMotorola inikezela ngesikrini seMoto G: 2015 ″, iSnapdragon 5 kunye nekhamera ye410MP
I-Moto G 2015 entsha esuka kwi-Motorola enesikrini esine-intshi ezintlanu, ikhamera ye-5 MP kunye ne-Snapdragon 13 chip ye- € 410.
I-Chrome OS Tricks kunye neeTutorials-Icandelo 2
Sinikela ngenxalenye yesibini yezifundo ezinikezelweyo kwinkqubo yokusebenza ye-Chrome OS. Kule nto siza kujongana ikakhulu nokunxibelelana ne-Android.
Uhlobo lweMoto X, lubonise iflegi entsha yeMotorola
IMotorola inikezele ngesimbo seMoto X, iflegi entsha yomenzi ojolise ekuqhekekeni kwimarike ngenxa yexabiso layo lemali
Ulandela njani isiganeko somboniso we-Motorola. Namhlanje lusuku olukhulu !!
Namhlanje siyakumema ukuba ubone isiganeko somboniso we-Motorola.
I-OnePlus 2 ngoku isemthethweni: i-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcina nge- € 399 kunye ne-3GB / 16GB ye- € 339
I-OnePlus 2 ibhengezwe ngokusesikweni ngeenguqulelo ezimbini, enye ine-3GB ye-RAM kunye ne-16GB yokugcina i- € 339 kunye nenye i-4GB / 64GB ye- € 399.
I-HTC Desire 626 ifika eSpain ukukhuphisana neMoto G
I-terminal entsha ekumgangatho ophakathi ovela kumenzi osekwe eTaiwan, i-HTC Desire 626, iya kufika eSpain ngenjongo yokukhuphisana noMlilo G.
I-OnePlus 2 ivuza iiyure ezipheleleyo ngaphambi kokunikezelwa kwayo
I-OnePlus 2 ihluzwa ngokweeyure ngaphambi kokunikezelwa kwayo ngokusemthethweni.
I-OnePlus ivula ugcino lwezimemo zokufumana i-OnePlus 2
Kusele iintsuku ezimbalwa ukufumana i-smartphone elandelayo yesiqalo esincinci saseTshayina. Kungenxa yoko le nto i-OnePlus ivule ukubhukelwa kwezimemo.
Ukucaciswa okucociweyo kwithebhulethi entsha ye-LG G PAD 2
I-LG iya kusebenza kwithebhulethi entsha phantsi kwegama LG G PAD 2.
Isamsung isusa uguqulelo lwe-128GB ye-Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge
Uhlengahlengiso lwezixhobo olwenziwe yiSamsung lwenze ukuba inguqulelo ye-128GB yeGPS S6 kunye neGPS S6 Edge inyamalale.
I-1.5 yezigidi ze-OnePlus Ones zithengisiwe okoko kwamilwayo
I-OnePlus 2 sele iza kutyhilwa. Kwiveki ezayo siya kuyazi yonke imfihlelo yeflegi entsha yomvelisi waseAsia.
I-OnePlus 2 ihamba ngeTENNA eqinisekisa zonke iinkcukacha zayo
I-Oneplus 2 ihamba ngeTENNA ibonisa zonke iinkcukacha zobugcisa beflegi entsha yomvelisi waseAsia
Sinesisombululo kubushushu beQualcomm Snapdragon 810
Apha unesisombululo sokuphucula ubushushu beQualcomm Snapdragon 810
I-Fnac ipapasha iinkcukacha kunye nexabiso ku-odolo lwe-Motorola Moto G 2015
I-Motorola Moto G 2015 entsha ityhile ixabiso elityholwayo kunye neenkcukacha kwiwebhusayithi yeFnac. Ulwazi olusemthethweni aluqinisekisi okanye aluphiki.
Namhlanje ndinovuyo ukukwazisa kwaye ndikufundise ukuba uyifaka njani eyona Rom ingcono kwiNqaku leLenovo K3.
Namhlanje ops ndicacisa inyathelo ngenyathelo ukuba uyivula njani iBootloader yeHuawei P8 Lite ngemvume kunye nemvume kaHuawei uqobo.
Imifanekiso emitsha yeMoto G 2015 ivuza
IMotorola kunye nokuvuza akuhambelani kakuhle, kwaye, kwakhona, sinokubona imifanekiso emitsha yekamva leMoto G 2015.
Iswitchwatch ejikeleze iSamsung iya kubizwa ngokuba yiGlass Gear A
Ismartwatch elandelayo yakwaSamsung iya kubizwa ngokuba yiGlass Gear A. Le setyhula smartwatch ekugqibeleni ayizukuphatha i-Android Wear kwaye iya kuyenza ngeTizen.
I-HTC One M8 iya kuhlaziywa kwi-Android M
UMo Versi uqinisekisile ukuba i-HTC One M8 iya kufumana uhlaziyo kwi-Android M. Date? kulindeleke ngoJanuwari okanye ngoFebruwari 2016
Uhlaziya njani ukubuyiswa kwe-TWRP kwiLenovo K3 Qaphela kuhlobo lwayo lwe-2.8.6
Namhlanje sikubonisa indlela yokuhlaziya ukubuyiswa kwakhona kwe-TWRP kwiLenovo K3 Qaphela ukuyishiya kwinguqulelo 2.8.6 iyilo loyilo lilonke.
Ewe kubonakala ngathi ewe, iMeizu kunye neNokia ziya kuba ngamaqabane kwimakethi yokufowuna
UMeizu uthumele uthotho lwezimemo kwintetho yeMeizu M2 apho yenza ukuba kucace gca kuNokia
Ngaba uMeizu uza kuba liqabane elitsha likaNokia?
UMeizu unokuba lihlakani elitsha likaNokia, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo iteaser epapashiweyo
IMoto G 2015 inokuboniswa ngoJulayi 28
Isizukulwana esilandelayo sesiphelo saseMelika, iMoto G 2015, sinokuhanjiswa ngoJulayi 28.
Ngaba iYurophu iya kushiyeka ngaphandle kokumiliselwa kokuqala kweGalaxy Note 5?
Ukuphehlelelwa kokuqala kweGlass Qaphela 5 kunokubambezeleka eYurophu. Olu lwazi luqinisekisa ukuba aluzukufika nge-21 ka-Agasti kwilizwekazi.
Umnyhadala ongafakwanga we-Samsung uza kuba nge-Agasti 12, 2015
Umnyhadala ongapakiswanga weSamsung we-12 ka-Agasti olandelayo, 2015 sele uqinisekisiwe.
I-ZTE Axon ibhengezwe ngokusesikweni nge-5,5 ″ QuadHD screen, i-Snapdragon 810 chip kunye ne-4GB ye-RAM
I-ZTE ibhengeze ngokusesikweni iflegi yayo entsha yeZTE Axon nge-Snapdragon 810 chip, 5,5 "QuadHD screen and 4GB of RAM.
Ukubukela iHuawei kunokukhutshwa kwakamsinya
Iwotshi yeHuawei, yenye yezona smartwatches zintle kwaye zinamandla ezikhoyo, ngoku malunga nokufika kwimarike.
Namhlanje sikubonisa inkqubo yokuhlaziya i-Lenovo K3 Qaphela kwi-Android 5.1 inyathelo ngenyathelo nakwividiyo.
Namhlanje sibonisa inyathelo ngenyathelo ukuba uyingcambu njani iLenovo K3 Qaphela ngendlela elula kwaye kubandakanya yonke into oyifunayo.
I-Nexus 5 ka-2015 ayinakulinganiswa kwi-AnTuTu
Ukuba ulwazi oluvela kwi-app ye-AnTuTu luyinyani, i-Nexus 5 ka-2015 ayinakuthelekiswa nanto.
9 yezigidi Imbeko 7 igcinwe kwiveki enye
Imbeko sele ikwazile ukugcina ngaphezulu kwe-9 yezigidi zeeyunithi kwisithuba esingaphantsi kweveki. Inani elibonisa impilo entle yenkampani
I-OnePlus inokumilisela i-OnePlus ezimbini zeMini
I-rumor entsha iza kwiiveki ngaphambi kokuba kuboniswe isixhobo esitsha se-OnePlus ezimbini. Ngokweli rumor, i-OnePlus ezimbini zeMini ziya kuba kuphuhliso.
IMotorola Moto G 2015 ibonakala kwiinguqulelo ezintsha
Isizukulwana esilandelayo seMoto G sikufutshane nekona. I-Moto G 2015 ivele njengokunikezela.
I-Nexus ye-Huawei isencinci, ingxelo ithi
Lo 2015 sizibonile izixhobo ezimbini zeNexus, enye yenziwe yiLG kunye nenye ngeHuawei. I-Nexus ye-Huawei kuthiwa isebusaneni.
UXiaomi ucaphula kumaphephandaba ngoJulayi 16, Xiaomi Mi5?
Umvelisi waseTshayina uXiaomi ubizele umatshini wokushicilela wecandelo nge-16 kaJulayi Ngaba siza kuyibona loo mini, iXiaomi Mi5 elandelayo?
Oku kukunikezelwa kwe-Samsung Galaxy A8 elandelayo
Ilungu elitsha losapho lweGalaxy liza kuphuma, yi-Samsung Galaxy A8. I-Phablet kuphela yi-5,9mm ubukhulu.
Kuthekani ukuba sidibanise i-Samsung Galaxy S6 kwiPepsi? Sikubonisa kwividiyo
Ngaba ucinga ukuba i-Samsung Galaxy S6 ayinamanzi? Sikubonisa okwenzekayo kwividiyo.
I-LG G4 kunye neDrone, nantsi indlela emangalisa ngayo ikhamera ye-LG G4
Namhlanje sikubonisa le vidiyo intsha ibhalwe ngekhamera ye-LG G4 evela kwidrone.
Ngoku ungathenga inqaku leMeizu M2 ngexabiso elingaphantsi kwe-150 yeeYuro
Ngaba ungayithenga inqaku leMeizu M2 ngee-euro ezingama-145 kuphela kubandakanya iindleko zokuhambisa? emva koko le post iyakunomdla.
IXiaomi Mi5 iya kubiza imali engaphantsi kwama-350 euros
Iimpawu zobugcisa kunye nexabiso leXiaomi Mi5, iflegi elandelayo yomenzi waseAsia eya kuthi thaca kungekudala, icociwe.
U-Sony unokumisela uluhlu olutsha lwe-Xperia Z5 ngo-Septemba
USony uzakuphehlelela uluhlu olutsha lwezixhobo zeXperia Z5 ngoSeptemba.
Ukuvuza okungaphezulu kwedatha kwi-LG G Pro 3
AmaKorea asebenza kwinguqulelo entsha yesebe labo lezixhobo ze-LG G Pro, sisizukulwana sesithathu kwaye siyakubizwa ngokuba yi-LG G Pro 3.
I-Nexus 5 2015 iqinisekisile; kwaye uqiniseke ukuba i-LG iyakwenza njalo
Umsebenzi we-LG ongaziwayo uqinisekisile ukuba umenzi uya kugunyaziswa ukuba akhe iNexus 5 entsha ka-2015.
Iibhetri ezikwiitheminali zeSamsung zinemakrofoni efihliweyo. Ah hayi, sisixhobo seNFC!
Ubuxoki obutsha bokuba iibhetri zeSamsung zibandakanya imakrofoni efihliweyo: akukho nto inokuthi iqhubeke inyani. Ngokwenyani badibanisa i-chip ye-NFC.
Umngxunya omkhulu wokhuseleko kuzo zonke iiterminal ze-LG. Zonke iimodeli kunye neenguqulelo !!
Umngxunya omkhulu wokhuselo ufunyenwe kuzo zonke iiterminal ze-LG ezinokuchaphazela zonke iimodeli kunye neenguqulelo zee-Smartphones kunye neetafile zamazwe aphesheya zaseKorea.
Imvakalelo !! I-Rom Evomagix Stock 30E ye-LG G2. I-Lollipop esemthethweni !!
Namhlanje ndikushiya indlela yokufaka yeyam ngokona ilungileyo yiRom Lollipop, iRom Evomagix Stock 30E yeLG G2.
Xiaomi Mi5, Snapdragon 820 kunye ne-4 GB ye-RAM?
Ukuvuza okutsha malunga neflegi elandelayo yomenzi waseTshayina, iXiaomi Mi5 ityhila imeko enokubakho yesiphelo.
Iingxaki zebhetri ye-Samsung Galaxy S4 nazi ezinye iingcebiso zokucinezela ngakumbi
Kule nqaku siza kukunika izisombululo kwiingxaki zebhetri ye-Samsung Galaxy S4 kunye nolona khetho lufanelekileyo lokuthenga.
Meizu MX5 thaca ngokusemthethweni
Iflegi entsha, uMeizu MX5, ovela kulo menzi waseTshayina uziswe ngokusemthethweni kuluntu ngokubanzi.
IHuawei Honor 7, ithiwe thaca ngokusesikweni iflegi entsha ye-Honor
Imbeko igqithise ngokusesikweni i-Honor 7, i-terminal entsha evela kumenzi wase-Asiya eya kubiza imali engaphantsi kwama-300 euros.